Edhisheni timu | Mahara emahara
Hardware Mahara chirongwa chakatsaurirwa kuparadzira nezve itsva Vhura Hardware matekinoroji. Vazhinji vanozivikanwa seArduino, Raspberry asi vamwe kwete zvakanyanya seFGAGA. Isu tiri veblog blog network ye Mashoko Blog iri kushanda kubvira 2006.
Muna 2018 tanga tiri Partners of Yemahara ne chimwe chezviitiko zvakakosha zveSpanish zvine chekuita neFree uye Open kufamba, zvese muHardware neSoftware
Iyo Hardware Libre yekugadzirisa timu inoumbwa neboka reMakers, nyanzvi muHardware, zvemagetsi uye tekinoroji. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
IT nyanzvi inofarira kwazvo nyika ye robhoti uye Hardware kazhinji kubva pazera diki, chimwe chinhu chakanditungamira kuti ndisagadzikane nezveazvino matekinoroji kana kuyedza ese marudzi emabhodhi uye masisitimu anowira mumaoko angu.
Ndiri mudiwa wemakomputa uye kunyanya Mahara Hardware. Ichangoburwa mune zvese nezve ino naka nyika, kubva kwandinoda kugovana zvese zvandiri kuwana nekudzidza. Mahara Hardware inyika inonakidza, ini handina mubvunzo nazvo.
Geek akapindwa muropa netekinoroji, mitambo yehondo uye kufamba kwemuiti Kuunganidza nekusatanura mhando dzese dzehardware ndiko kuda kwangu, izvo zvandinoshandisa nguva yakawanda pahupenyu hwangu hwezuva nezuva, uye izvo zvandinodzidza zvakanyanya kubva.
Anoda chero chero mhando yeetekinoroji uye mushandisi wemhando dzese dzeanoshanda masisitimu, uyezve munhu anofarira kubata chero mhando yemagetsi mudziyo inowira mumaoko angu.